दशैं र कोरोना : के लकडाउन हुन्छ र ? – Rapti Khabar
१३ असोज, काठमाडौं । भिमान (सिन्धुली) निवासी एक युवक मृगौला रोगी श्रीमतीको शल्यक्रियाका लागि बुधबार र विहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा दुई रात बास बसे । यो खबर अरुण बरालले अनलाइनखबरका लागि लेखेका छन् ।
राति अन्य कुरुवासँग उनी सोधिरहेका हुन्थे, सरकारले दशैंमा फेरि लकडाउन गर्छ कि गर्दैन होला ? आम नागरिकको मुखमा अहिले यही प्रश्न झुण्डिएको छ, के दशैंमा फेरि लकडाउन हुन्छ र ?